Chiregai nguva yakapfuura ichiva yakakwana yokuita zvinodiwa nevechirudzi zvinoti unzenza, kutevera havi dzomuviri, nokuraradza nokusazvibata kwavararadzi nokutamba kwakaipa nokunamata zvisiri Mwari kwakafumuka.
Chirega kuramba uchingonwa mvura chete asi inwa waini shoma kuitira mudumbu mako uye nokurwara rwara kwaunoita.
Enda udye chokudya chako nomufaro unwe waini yako nemwoyo unofara nokuti Mwari anofadzwa nezviito zvako.
Waini munyombi hwahwa mupopoti anoteteretswa nazvo haana kungwara.
Usatorwe mwoyo nokutsvuka kwewaini painenge yobwaira mukomichi ichinyatsoti yerere mugurokuro.
Ngatizvibatei sezvatinoita masikati, tisingatambi zvakaipa, nokuraradza noupombwe nokuzviregerera nokukakavadzana nokuitirana shanje.
 Hachisi chinhu chamadzimambo Rimueri, kunwa waini kana vatongi kuda hwahwa, nokuti vangadaro vanwa vakakanganwa zvakatemwa vachizokanganisa zvinofanira kuitirwa varombo.
 Munokudzira mombe uswa uye mbeu dzokuti munhu arime kuitira kuti aburitse zvokudya muvhu newaini yokufadza nayo mwoyo womunhu namafuta okuti apenyese uso hwake nawo nechingwa chokusimbisa mwoyo womunhu nacho.
 Zvinhu zvose zvingave zvazvo zvinobvumirwa asi handizvose zvinobatsira. Zvinhu zvose zvingave zvazvo zvinobvumirwa asi handizvose zvinovaka. Munhu ngaarege kufunga zvinobatsira iye pachake chete asi ngaafunge zvinobatsira mumwe wake.
 Tenzi apika norudyi rwake apika nesimba roruoko rwake kuti, “Handichambofa ndakapazve mbesanwa dzenyu kuti dzive chokudya chavavengi venyu uye vatorwa havasi kuzombonwazve waini yenyu yamakadikitira kushanda. Asi kutoti vanenge vaisa mbesanwa mumatura ndivo vachadzidya vachirumbidza Tenzi, vanenge vatanha magirepisi ndivo vachanwa waini yacho vari munhandare dzeNzvimbo yangu Inoera.”
 Zvino mabasa enyama anooneka pachena, ndeaya anoti: upombwe nokuita zvakaora, kwouya kusazvibata nokunamata zvinhu zvisiri Mwari kwoti kuroya nokuvengana kwozoti kunetsana, nokuitirana shanje kwouyawo hasha, nokungozvifunga, kwozotiwo kupesana nokuita mapato anovengana uye kusafarira zvakanaka zvavamwe, uyezve kuraradza nokusazvibata kwezvidhakwa nezvimwe zvakadaro. Ndinokuyambirai sokukuyambirai kwandakamboita ndichiti vanoita zvakadai havawani nhaka youmambo hwamwari.
 Kunyange ndisiri muranda waani zvake, ndakazviita muranda wavose kuti ndiwane vakawanda. KuvaJudha ndakazviita somuJudha kuti ndiwane vaJudha. Kuna vari pasi pomutemo ndakazviita sendiri pasiwo pomutemo kunyange zvazvo ndakanga ndisiri pasi pomutemo kuti ndiwane vakanga vari pasi pomutemo. Kuna vari kunze komutemo ndakaita sendiri kunze komutemo asi kwete somunhu ari kunze komutemo kuna Mwari asi ndiri pasi pomutemo waKristu kuti ndiwane vari kunze komutemo. Kuna vasina simba ndakava munhu asina simba kuti ndiwane vasina simba. Ndakava zvinhu zvose kuna vose kuti napose pandinogona, ndinunure vamwe vavo. Zvose izvozvo ndinozviitira Shoko Rakanaka kuti ndigowanawo zvandinowana muzvikomborero zvaro.
 Kana hama yako ichiodzwa mwoyo nezvauri kudya hauchisiri kuita zvine rudo. Usaite kuti chaunodya chiparadze munhu akafirwa naKristu. Saka usaite kuti chakanaka kwauri chizonzi chakaipa nokuti umambo hwaMwari haurevi chokudya kana chokunwa asi hunoreva ururami norugare nokufara muna Mweya Mutsvene. Munhu anoshandira Kristu zvakadai, munhu anofadza Mwari uye anodiwawo navanhu. Naizvozvo ngativavarirei kuita zvinounza rugare nezvinoita kuti tivakane. Musaparadze basa raMwari pamusana pezvokudya. Chokudya chose chakanaka asi hazvina kunaka kuti munhu aite kuti vamwe vatadze pamusana pezvaanodya. Zvakatonaka zvazvo kusadya nyama kana kunwa waini kana kuita chipi zvacho chingaite kuti hama yako itadze.
 Waini payakapera, amai vaJesu vakati kwaari, “Vanhu vapererwa newaini.” Jesu akati kwavari, “Nhai amai, ko isu tinei nazvo, nguva yangu haisati yasvika.” Amai vake vakati kuvashandi, “Itai zvose zvaanenge akutaurirai.” Zvino ipapo pakanga paina mazigate matanhatu amabwe maererano netsika yavaJudha yokuzvichenura. Rimwe nerimwe rawo raiita marita makumi manomwe anamashanu kusvika kuzana ramarita rina marita gumi namashanu. Jesu akati kwavari, “Zadzai makate aya nemvura.” Ivo vakaazadza kuti tuba. Akazovati, “Zvino chicherai imwe muendese kuna samukuru womuchato.” Saizvozvo vakaenda nayo. Samukuru uya paakaravira, mvura iya yakanga yatova waini asi iye akanga asingazivi kwayakanga yabva. Asi Vashandi vaya vakanga vachera mvura ndivo vaizviziva. Samukuru womuchato akadaidza muwani akati kwaari, “Vanhu vose vanotanga vapa vanhu waini yakanaka. Kana vachinge vanyatsonwa zvavo ndokwakuzovapa isina kunaka asi iwe wachengeta waini yakanaka kusvikira iye zvino.” Ichi ndicho chiratidzo chaJesu chokutanga chaakaita kuratidza mbiri yake. Achiita ari kuKana yokuGarirea.